Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Iindawo zokufikela eziPhezulu zaBathandi beZakhiwo zakudala
Nokuba uligcisa loyilo elifuna inkuthazo okanye unothando olukhulu kunye nothando olukhulu lobugcisa obungene ekudalweni kwezakhiwo zakudala, ke kukho indawo ezininzi kwihlabathi onokuthi ube nazo. ukufumana amava kunye nokuphonononga. Xa usenza oko, uya kuqiniseka ukuba uyondla amehlo akho kwizinto ongayi kuzilibala ngokukhawuleza.
Ukufumana ezinye zeendawo eziphezulu zehlabathi kubathandi boyilo lwakudala, qiniseka ukuqhubeka ufunda.
Indawo ye-UNESCO yeLifa leMveli ye-Úbeda, efumaneka kwingingqi yaseJaén yaseSpain, ngokuqinisekileyo ifanele ukutyelelwa abathandi bezakhiwo ezidalwe kwi-classic style Renaissance. Esi simbo, sakha saqheleka eSpain, ngoku siphelile, kodwa sigcwalisa izitrato ukusuka kwelinye icala lesixeko ukuya kwelinye, okuthetha ukuba awusoze ube kude kakhulu kuyo.
Isebenza njengesango laseAndalusia, isango elizaliswe lulwandle lwemithi yomnquma ekhethekileyo, akukho ngaphantsi, le yindawo efanelekileyo yokutyelela ukuba ufuna ukubona ngokwenene kwaye ube namava angabanjwanga, imbali engapheliyo yaseSpain. Ilali yayo engamawele, iBaeza, ekumgama oziikhilomitha ezili-10 kuphela, nayo ayimbi kakhulu!
I-St. Petersburg, eRashiya
Mhlawumbi akukho ndawo ibhetele kubathandi bezakhiwo zakudala ukuba baye kulo mhlaba kuneSt. Apha, uya kuzifumana untywiliselwe kakhulu kwintshukumo yeRococo, isitayile esathi saduma ngenkulungwane ye-18 eFransi kodwa kungekudala safumana indlela eya eRashiya. Into oya kuyifumana xa uthe wonwabela amehlo akho kwizakhiwo zaseSt. Ukuba ungumzobi oqeqeshiweyo, ngoko uya kuqiniseka ukuba uyasishiya esi sixeko unempembelelo evela kuThixo malunga nomsebenzi wakho olandelayo wokuyila.
ENairobi, eKenya kukho enye yezona zindlu zibalaseleyo emhlabeni eziseleyo 'zelizwe lamaNgesi'. I indlu entle yeGiraffe Manor ivulelwe nabani na ukuba eze ayibone. Enyanisweni, ivulekile ukuba nabani na aze ahlale kuyo! Ekuhlaleni apha, awuzukubona kuphela uyilo olubalisa amabali aliwaka njengoko kuvakala umva ukuya kutsho kwii-1930s zexesha lobukoloniyali, kodwa uya kubona nenani leentlobo ezahlukeneyo zezilwanyana zasendle ezihamba kwingca entle yendlu. Njengoko sele uqikelele, uya kufumana isabelo sakho esilungileyo sezindlulamthi, kodwa kunye neendlulamthi, uya kubona kwakhona inani elincinci, elifana ne-warthogs kunye neepikoko.
Ukusuka eSpain ukuya eRashiya ukuya eKenya, kunokufumaneka iindawo ezithile kunye nezakhiwo ezithi, xa zibonwa, zihlale kwiliso lengqondo labathandi bokwenene bezakhiwo kwiminyaka ezayo. Ehlabathini lonke, kuwo onke amazwekazi, kunokufunyanwa izakhiwo eziye zahlala ixesha elide kwaye ngoku ziye zaba zobugcisa. Ke, yintoni ekuthintelayo ukuba uphume kwaye uyibone yonke?